Sidan ayaad faafidda ku yareyn kartaa - Krisinformation.se
TB1 Smittspridning So
Si loo hakiyo faafinta cudurka cusub ee faayraska karoona waxaa muhiim ah in aynu si wada-jir ah isu caawino.
Uppdaterades 14 maj 2021 15:21
Caawimaad ka geyso in la yareeyo faafinta cudurkan
Si loo hakiyo faafinta faayraska karoona ee cusub waa muhiim in aynu si wada-jir ah isu caawino.
Guriga joog tijaabo iska qaad haddii aad calaamado covid-19 ah leedahay. Eeg liistada calaamadaha ee bogga xagiisa hoose ku taala.
Xaddid xiriirada dhowdhow ee cusub oo kaliya la kulan/la dhaqan dad ka tiro yar.
U jirso masaafad dadka kale oo iska ilaali goobaha saxmad/ciriiri badan leh.
Si fiican oo joogto ah ugu dhaq gacmaha saabuun iyo biyo ama isticmaal dawada jeermiska gacanta disha.
Ugu safar sida ugu suurtogalsan ee aan fayruska loogu kala qaadeynin.
Ka taxaddar markaad booqato dadka 70+ ah ama kuwa ka tirsan kooxda khatarta ugu jira. Waxay Folkhälsomyndigheten haysaa macluumaad ku saabsan sida aad dadka si ammaan ah ula kulmayso/ugula dhaqmayso. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Calaamadaha caadiga ah ee covid-19
dhibaato neefsashada ah
cabur sanka ah
xanuun muruqyada iyo laabatooyinka ah
yalaalugood, lallabood (yaayaqsood)
dareenka urta iyo dhadhanka oo hoos u dhaca
Qofka u xanuusada covid-19 waxaa ka muuqan karta hal ama dhowr ka mid ah calaamadahaas. Aad ayay caadi u tahay in qofku uu waayo dareenka urta iyo dareenka dhadhanka xilli wakhti ah iyadoo tani la xiriirta infekshanka qaybta sare ee marinka hawada. Xitaa waxaa la sheegay shuban. Dadka badankooda waxaa ku dhaca dhibaato khafiif ah taas oo u iman karta si tartiib ah oo keligeed iskaga dhamaata iyadoo qofku isku daryeelo guriga. Dadka qaarkoodna si khatar ah ayay u xanuusadaan, tusaale ahaan dhibaatooyin in la neefsado iyo barar dhanka sambabada ah.
Haddii aad jiran tahay ama calaamado leedahay.
Guriga joog xitaa haddii aad waxoogaa xanuuna ah uun dareemayso, madaama oo aanad si cad u ogaan karin inay taasi ku xidhan tahay covid-19 iyo in kale.
Is tijaabi. Dadka waaweyn iyo carruurta ilaa iyo fasalka xanaanada ka horeeya dhigata (förskoleklass) ayaa loo soo jeedinayaa inay tijaabo lagu eegaayo infegshanka socda iska qaadaan. Intaad iska tijaabo qaadista iyo natiijooyinka baaritaanka sugeyso, waa inaad u dhaqanto sidii oo aad covid-19 qabto, taasi waxa weeye inaad guriga joogto oo aad iska ilaaliso xiriirada dhow dhow iyo inaad nadaafada ka taxadirto
Haddii baaritaanku uu muujiyo inaad covid-19 qabtid waa inaad guriga joogtid ugu yaraan todoba maalmood ka dib markaad jiratay. Labadii maalmood ee ugu danbeeyey waa inaad caafimaad qabtaa oo aanad xumad laheyn. Kadibna waxaad dib ugu laaban kartaa shaqada, dugsiga ama waxqabad kale.
Guriga isku karantiimee Macluumaadka ku saabsan ilaa inta ay tahay in guriga la joogo. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Haddii aad la kulantay qof Covid-19 qaba oo aad calaamado leedahay
Haddii aad ogtahay inaad qof covid-19 qaba la kulantay oo aad calaamado leedahay waa inaad sameysaa waxa cinwaanka kore ee ”Om du är sjuk” hoostiisa ku yaala. Haddii qofka covid-19 qabaa uu qoyskaaga ka tirsan yahay, akhriso xitaa waxa ku yaala cinwaanka ”Om någon i hushållet har bekräftad covid-19" hoostiisa ee khuseeya waxa shaqeynaaya marka la xaqiiiyo in covid-19 la qabo.
Haddii aad la kulantay qof Covid-19 qaba oo aanad calaamado laheyn
Haddii aad la kulantay qof Covid-19 qaba oo aanad calaamado laheyn waa inaad si kasta ha ahaatee ka fikirtaa in laga yaabo inaad qaadey. U fiirso/ka feejignow inaad wax calaamado ah isku aragto inta aad ku jirto muddada aanu cudurku soo if bixin. Taasi waa xilliga ay qaadanayso laga bilaabo markaad cudurka qaaddo illaa iyo inta ay calaamadu jidhka ka soo if baxayaan. Taasi badanaa waa 5 maalmood laakiin waxay noqon kartaa 2 ilaa 7 maalmood iyo kiisas gaar ah oo ilaa 14 maalmood qaata.
Waa inaad xiriirada dhowdhow ee dadka kale aad ka fogaato inta aad muddada aanu cudurku soo if bixin ku jirto. Haddii ay suurtogal tahay waa inaad guriga ku shaqeyso.
Haddii qof ka tirsan qoyska uu leeyahay calaamado covid-19 ah
Isku day inaad masaafad ugu yaraan gacan dhererkeed ah ka istaagto qofka jiran.
Gacmaha ku dhaq saabuun iyo biyo muddo ilaa 20 ilbiriqsi ah inta/mararka ugu badan ee aad karto.
U fiirso/ka feejignow inaad calaamado isku aragto. Taasi waxay khuseysaa dhamaan xilliga lagu jiro wakhtiga xanuunka la qaaday ilaa inta uu soo shaacbaxaayo (2-14 maalmood, badanaa 5 maalmood).
Guriga ku shaqee haddii aad fursad u heli karto.
Haddii qof qoyska ka tirsan uu leeyahay covid-19 la xaqiijiyey
La xiriir daryeel caafimaad iyo bukaanka si aad iskugu tijaabiso, iyadoo aan loo eegeynin haddii aad calaamado leedahay iyo haddii kale toona. Guriga joogto oo iska ilaaliso xiriirada dhow dhow. Waxaad xaq u leedahay inaad dalbato gunnada la siiyo dadka infegshanka qaba ee laga qaato Försäkringskassan ee dakhligaad weyday ah.
Qofka horey looga helay covid-19 ama lixdii bilood ee ugu danbeeyey la xaqiijiyay inuu leeyahay unugyada difaaca jirka ayaa ka reeban xeerarka.
Haddii carruurta jirta da'da xanaanadu ay calaamado yeeshaan
Folkhälsomyndigheten ma soo jeedinayso in carruurta dhigata xanaanada tijaabo laga qaado haddii ay leeyihiin calaamado covid-19 ah.
Haddii ay calaamado jiraan, waa in ilmahu guriga joogo illaa iyo inta uu calaamado leeyahay iyo laba maalmood oo kale.
Haddii ay toddobo maalmood ka soo wareegeen markii la jirooday iyadoo ay labadii maalmood ee ugu dambeeyay aan qandho la laheyn oo xaalada caafimaad ee guud ay wanaagsan tahay, ayaa ilmuhu uu dugsiga xanaanad ku laaban karaa xataa haddii uu isagu sii leeyahay calaamado khafiif ah, tusaale ahaan qufac yar ama diif/siin.
Saddex todobaad ka dib markaad dawska koowaad qaadato ayaa qofka la talaalay uu la kulmi karaa dadka ka tirsan dhowr qoys oo kala duwan. Waxa sidoo kale la sameyn karaa in dukaanka laga soo adeegto.
Laakiin waa in dadka la tallaalay ay sideeda kale raacaan talooyinka aasaasiga ah oo guriga la joogo haddii la jiran yahay, gacmaha la dhaqo iyo in masaafad la isku jirsado.
Talo ku saabsan af dhowre/af gashi
Haddii aad dalbato isticmaalka af dhowre/af gashi ayaa waxa muhiim ah in ka saxda ah la isticmaalo oo isticmaalidu sida saxda ugu dhacdo. Wax dheeraad ah ka akhri sida af dhowre/af gashi loogu isticmaalo sida sax ah
Wakhtigan hadda la joogo ayaanay Folkhälsomyndigheten soo jeedineynin guud ahaan isticmaalka af dhowre/af gashi ee bulshada dhexdeeda. Haddii si kastaba ha ahaatee aad dalbato isticmaalka af dhowre/af gashi, ayaa waxa muhiim ah in taas si sax ah loo sameeyo.